Umkhiqizi we-Custom Spring Spring Deluxe | Rayson
I-Sweet Dream Priver Top Plutthen Pocket Pocket Spring Matress + emnandi yokuphupha umcamelo ophezulu wePlush Pocket Spring Matress Spring Matress, umgadli ophezulu, i-Plusth: //www.raysenglobal.com.cn
ERayson, ukuphuculwa kwezobuchwepheshe kanye nokwenza izinto ezintsha kuyizinzuzo zethu ezibalulekile. Selokhu kwasungulwa, besilokhu sigxile ekuthuthukiseni imikhiqizo emisha, ngcono ikhwalithi yomkhiqizo, kanye nokusebenzela amakhasimende. I-Spring Bed Deluxe namhlanje, iRaysonon ibeka phezulu njengomhlinzeki ochwepheshe futhi onolwazi embonini. Singahle siklame, sithuthukise, sikhiqize, futhi sithengise uchungechunge lwemikhiqizo eyehlukene ngokwethu sihlanganisa imizamo nokuhlakanipha kwabo bonke abasebenzi bethu. Futhi, sinesibopho sokunikela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zamakhasimende kufaka phakathi ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezisheshayo ze-Q & A. Ungathola okuningi nge-Deluxe yethu entsha yentwasahlobo yentwasahlobo nenkampani yethu ngokuxhumana ngqo nathi.Lokhu umkhiqizo uphephile ngokwanele. Ekusebenzeni, imicu esetshenziselwa ukudala indwangu ayilashwa nganoma yimaphi amakhemikhali futhi ayinazinto eziyingozi.
Ngingavakashela ifektri yakho?
Yebo, wamukelekile ukuvakashela efektri yethu nganoma yisiphi isikhathi, siseduze naseGuangzhou Baiyun International Airport, kuthatha nje ihora elilodwa ngemoto, futhi singahlelela imoto ukuthi sikuthathe.